Daawo Sawirro: Banaan bax weyn oo maanta ka dhacay Muqdisho iyo Masuuliyiin ka qeyb gashay! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Banaan bax weyn oo maanta ka dhacay Muqdisho iyo Masuuliyiin ka qeyb gashay!
Daawo Sawirro: Banaan bax weyn oo maanta ka dhacay Muqdisho iyo Masuuliyiin ka qeyb gashay!
Waxaa maanta Taalada Dal jirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho lagu qabtay banaan bax aad u weyn oo lagu taageerayay Madaxweynaha Cusub ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Banaan baxa uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir waxaa kasoo qeyb galay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid 17-ka degmo ee gobolka Banaadir, waxa ayna dadkan wateen sawirada Madaxweyne Farmaajo iyo astaanta calanka Soomaaliya.
Shacabka kasoo qeyb galay Banaan baxa ayaa ku qeylinayay hal kudhigyo ay ku taageerayeen kuna soo dhaweenayeen Madaxweyne Farmaajo, waxa ayna dadku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin Guusha Farmaajo.
Banaan baxa waxaa kasoo qeyb galay Gudoomiyaha gobolka Banaadir, qaar kamid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka, Saraakiil ciidan iyo masuuliyiin kale kuwaa oo kula hadlay shacabka banaan baxayay Taalada dal jirka Dahsoon.
Banaan baxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee lagu taageerayo Madaxweyne Farmaajo oo ka dhaca Muqdisho, wxaana horey Muqdisho iyo gobolada qaar uga dhacay Banaan baxyo kale oo lagu taageerayay Guusha Farmaajo.
Previous PostDaawo sawirro Siyaasiinta Isaaqa oo saf dhaadheer ugalay Raisul wasaraha Tigreyga! Next PostCiidanka Amison Maxaay Shacbiga Soomaaliyeed si baraar ah Baabuurta u dul mariyaan?